I-Mansard - ngakho-ke ayimangalelwa ngaphambi kwesimiso, esasetshenziswa ngaphandle kwendawo yokugcina noma indawo yezinceku ezizohlala, namuhla ujabulela ukuthandwa kakhulu. Isimo esingavamile, ukugoqa okuphazamisayo kophahla, ukusondela kwesibhakabhaka esinezinkanyezi, umoya okhethekile kanye nokungaqondakali kwesikhala kwenza kube lula ukuthi ingaphakathi le-attic liyingqayizivele futhi lingavamile, ngenxa yokuthi leli gumbi ngokuvamile liba yindawo yezintandokazi kakhulu kuwo wonke amalungu omndeni.
Uma ucabangela ukuhlelwa kwendawo yangaphakathi ye-attic, kubalulekile ukucabangela zonke izici zayo bese uzama ukwandisa isikhala esisebenzayo. Ukuba khona kuleli kamelo lezindawo ezinamapulangwe ahlukene ahlukene, inqwaba yamacembe afihliwe ahlukene akufanele neze kuthintele indiza yombono wezinkampani, kodwa, ngokuphambene nalokho, yikhuthaze kuphela futhi ikhuthaze ukwakha ingaphakathi elingavamile nelodwa. Yiqiniso, kuhle uma ukwakhiwa kwe-attic kwenziwa ngokulandela iphrojekthi echazwe kakade ehlinzekela ukusetshenziswa kwalesi sisekelo ngezinhloso zangaphambi kokunqunywa. Ezimweni ezinjalo kuzoba lula ukuyihlomisa, ngoba kakade kunezingcingo ezidingekayo, kusetshenziswe ngokucophelela, zonke izingxoxo ezidingekayo zobunjiniyela zizofakwa, okuzovumela ukudala izimo zokududuzeka nokunethezeka ngokushesha.
Kodwa-ke, noma ngabe ngaphambili endlini kwakungekho igumbi elibheke kahle ekwakheni i-attic ekwakheni i-attic ehlelwe kahle, omunye akufanele aphelelwe ithemba, umnikazi ngamunye angenza wonke umsebenzi wokwakhiwa okudingekayo futhi asebenzise ingaphakathi elisebenzayo nelungile.
Impahla eyinhloko kanye nenzuzo enkulu yekamelo ngalinye le-attic kubhekwa njengamafasitela. Uma kukhona ukukhanya okungaphezulu, okungaphezulu kokuqala futhi okuthakazelisayo umphumela wokugcina uzoba. I-geometry engavamile ye-mansard ikuvumela ukuba ufake amawindi wezinhlelo ezivamile namasayizi, okugcina, kuphela kumdali wezangaphakathi. Yini engase ibe mnandi kakhulu, isibonelo, iwindi elikhulu ngaphezu kombhede, lapho izinkanyezi zibukeka ngobusuku ebusuku? Noma amafasitela amakhulu amaFulentshi phansi, enza umqondo wokubalekela nokukhululeka? Ngakho-ke, amafasitela acatshangwa kahle njengenye yezinto ezisemqoka ekuklanyeni kwesikhala se-attic .
Ngokuvamile, ngaphakathi kwe-attic kuncike ngokuphelele kulokho okuzofanele kwenziwe. Igumbi elibanzi elinophahleni oluphambili ngokuvamile linikezwa indima egumbini lokuphumula, amakamelo amancane okugubha ngamapulangwe anomumo ophahleni ophahleni afanelekile njengamakamelo abantwana, izindlu zokulala, amahhovisi. Ubukhulu obukhulu bekamelo lukuvumela ukuba ulihlomise ngegumbi lamabhilidi kanye nendawo yokuphumula noma yokuzivocavoca, futhi ukutholakala kokuxhumana okudingekayo kwenza kube lula ukuhlela ikhishi kanye nokugeza okungeziwe.
Kungakhathaliseki ukuthi kwakunjani, ukudala ingaphakathi le-attic, kufanele ulandele ngokucacile umthetho owodwa: zonke izici ezingavamile zokwakha zaleli kamelo kufanele zihlanganiswe ngokwakho, futhi uma ukhetha uhlelo lombala wezindonga zokuhlobisa nokushayela - ungathathwa yizinyosi ezimnyama. Izingxenye ezihlangothini zingasetshenziswa ezinhlobonhlobo zamakhandishi azakhelwe ngaphakathi, futhi ifenisha kufanele ibekwe eceleni kwezindonga, ngaphandle kokuhlanganisela ingxenye ephakathi ye-attic.
Ngokuyinhloko, kule gumbi lokuqala kungcono ukusebenzisa ifenisha elula ngendlela ye-modular kanye nokwenziwe ngokwezifiso. Ifenisha yesimanje ejwayelekile, evumelana kahle egumbini elivamile, ingaphazamisa kalula ingaphakathi elingavamile le-attic, kuyilapho amakhabhinethi, ama-sofas, amatafula nezinye izinto ezenziwe ngokuvumelana nezinklamo ezikhethekile zizohambisana ngokugcwele nomklamo owakhiwe ekamelweni.
UMansard akafuni nje ukukhanya kwelanga kuphela . Ngakho-ke, ukuchichima kwezibani ezihlukahlukene, izibani eziphansi, izibani ezikhanyayo, ukukhanyisa ngokucophelela zonke izingxenye zaleli kamelo elingavamile kusihlwa, kuzokwenza ukuthi ingaphakathi le-attic lihlanzeke futhi likhangele nakakhulu.
Lapho ukwakhiwa igumbi lokubhekelela, awufanele uthathwe ngobuciko, uzinike indawo ewusizo kakhulu njengomhlatshelo. Ukuthuthukisa imibono yobuciko eqondile neyokuqala, awusayikukhohlwa ukusebenza, okuyinto engathandeki kakhulu ukungayinaki.
Ama-arches efulethini: isitayela elicwengileko nesasendulo
I-Paroc (ukugxilisa): ukubuyekezwa, ama-specs, ubungani. I-Paroc ukugxila okwengeziwe: ukubuyekezwa, ama-specs, ukubuyekezwa
Kanjani ukufikelwa isinxi, uma kunesidingo?
Ltd. "RusAlyans Story": impendulo ku abasebenzi